မတရားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများအပေါ် NLD ၏ ဆန့်ကျင်မှုအား ထောက်ခံ ကြိုဆိုသည့် အခမ်းအနားကျင်းပမည်
၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် နအဖ စစ်အုပ်စုမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေများသည် တရားမျှတမှု မရှိသဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနေဖြင့် ပါတီအဖြစ် ထပ်မံမှတ်ပုံတင်တော့မည်မဟုတ်ဟု မတ် (၂၉) ရက်တွင် ပြုလုပ်သည့် ဗဟိုဦးစီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ပါတီမှတ်ပုံ မတင်ရေး ဆုံးဖြတ်ချက်သည် လူထုကို မျက်နှာမှု၍ ပါတီရပ်တည်မှုထက်၊ တနိုင်ငံလုံး၏ အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို ဦးတည်သောကြောင့်
ကျွန်ုပ်တို့ ယူကေနိုင်ငံရောက် အင်အားစုများ အနေဖြင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံသည့် အခန်းအနားတစ်ခုကို ကျင်းပမည် ဖြစ်ပါသဖြင့် ယူကေနိုင်ငံရောက် အင်အားစုများ အနေဖြင့် အဆိုပါ ထောက်ခံပွဲ အခန်းအနားသို့ မပျက်မကွက် တတ်ရောက်နိုင်ကြပါရန် မြန်မာနိုင်ငံအရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကော်မတီ(ယူကေ)မှ လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေ့ရက် - ၁၁ရက်၊ ဧပြီလ ၂၀၁၀
အချိန် - ညနေ ၆နာရီ မှ ၈နာရီအထိ
117-125, West Hendon Broadway,
London, NW9 7BP (Map Here) BUS 142, 32.
မြန်မာနိုင်ငံအရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကော်မတီ (ယူကေ)
We would like to invite you to attend the supporting of NLD decision on unjust electoral law of the SPDC regime.
On the 29th of March, the National League for Democracy (NLD) to reject party registration and not take part in the Burmese election. National League for Democracy (NLD) chooses to continue to stand together with the people of Burma by rejecting the regime's sham election. They made history.
Therefore, we all need to come together to Support for National League for Democracy (NLD) party’s decision for Burma
Could you also please kindly forward or sendamessage to your friends to support for NLD?
Burma Initiative Coordination Committee
Via: Ko Htike's Blog
Labels: NLD News
ကိုနေဘုန်းလတ် PEN American Center က ချီးမြှင့်သော ...
Cartoon: ဗျောက်တန်းလန်းနဲ့ ၂၀၁၀ ပြည်သူ့လွှတ်တော်
CNN မှ သတင်းထောက် Dan Rivers မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်ပ...
Free Zarganar Event
The Best Thingyan Remix and Dance of The Year 2010 ;)
လန်ဒန်သင်္ကြန် ၂၀၁၀ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး
အန်တီမာမာအေးရဲ့ ၂၀၁၀ မြန်မာနှစ်သစ်အတွက် အထူးသီချင်း
Free Zarganar! - An afternoon of comedy, poetry, p...
2010 Myanmar Thingyan ( Bay Area, N. California )
သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ကန်တော်ကြီးတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲဟု သတင်...
Oslo သင်္ကြန် ၂၀၁၀
၁၉ ကြိမ်မြောက် မိသားစုအတာသင်္ကြန်ပွဲတော် - တိုကျို -...
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံရောက် မြန်မာမိသားစုများ၏ နှစ်သစ်ဆုေ...
မတရားသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများအပေါ် NLD ၏ ဆန့်ကျင်...
မြို့မတူရိယာအသင်းကြီး နယ်ပွဲများ ဆက်တိုက်ဖျော်ဖြေေ...
ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည် (သို့) Citizen of Burma Award
NLD မှ ပြည်သူသို့ ပန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်